शिक्षा « News of Nepal
इश्वरराज ढकाल । शिक्षाको दूरदृष्टि, भावी योजनासहितको भिजन, मिसनका विषयमा छलफल अघि बढाएको आयोगले अब बन्ने प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गरेको थियो। प्रस्तावनामा के उल्लेख गर्ने?, संघीयतामा शिक्षाका विषय कसरी
काठमाडौंस्थित टुडेज युथ एसियासँगको सहकार्यमा अमेरिकास्थित स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले दोलखाको एक विकट गाउँ भैंसेको इन्जिनियरिङ डिजाइन गरेका छन्। स्ट्यान्डफोर्ड विश्वविद्यालयको ग्लोबल इन्जिनियरिङ प्रोग्रामअन्तर्गत विद्यार्थीहरूले उक्त गाउँको डिजाइन तयार गरेका हुन्।
राजर्षि गुरुकुल स्कुल, सल्लाघारी भक्तपुरले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम समर स्प्ल्यासलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ। बालबालिकाहरूलाई पढाइका अलावा साहसिक खेलकुद, स्वस्थ्य मनोरञ्जन दिने मनसायबाट गरिन लागेको सो कार्यक्रम
काठमाडौं । भारतको भागवंत विश्वविद्यालयले नेपाली विद्यार्थीलाई जुनसुकै कोर्षमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । विश्वविद्यालयका डिन डा. धर्मेन्द्र दुवे केही दिनदेखि काठमाडौं आउनुभएको छ । विश्वविद्यालयले १०
३ नम्बर प्रदेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात असमान रहेको पाइएको छ। शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण सुझाव कार्यदलले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकमा शिक्षक विद्यार्थीे अनुपात असमान रहेको देखिएको हो। प्रदेश ३ का १३ जिल्लाका शिक्षा
४६ विद्यालयमा सुविधासम्पन्न भवन
रोशन पराजुली २०७२ वैशाखको भुकम्पमा क्षति भएका मकवानपुरका विद्यालयमध्ये ४६ वटामा सुविधासम्पन्न विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ। सरकार तथा विभिन्न सहयोगी संघसंस्थाको सहयोगमा ती भवन निर्माणसम्पन्न भएर ती भवनमा पठनपाठन
सुप्रभात भण्डारी बिगत ८४ वर्ष अगाडि देखि बिद्यालय शिक्षाको फलामे ढोका भनेर चिनिने गरेको हालको एसईई परिक्षा अझैपनि यसको समाजमा उच्च महत्व रहिआएकोछ। पहिले प्रवेशिका परिक्षा भनेर चिनिने पछि आएर
ईश्वरराज ढकाल सरकारले उच्च शिक्षामा सुधार भएको दाबी गरे तापनि दर्जनौं समस्या यथावत् रहेका छन्। शैक्षिक बेरोजगार श्रम बजारअनुकूल पठनपाठनको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षालगायतका कारण उच्च शिक्षाको अवस्था खस्कँदै गएको हो।
उत्कृष्ट शिक्षा बोर्डिङ छाडेर सरकारीमा
रोशन पराजुली बोर्डिङबाट त्यस विद्यालयमा आउने विद्यार्थीको संख्या धेरै छ। शिक्षालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतासाथ लिएर यस क्षेत्रमा मनग्ये लगानी गरे पनि आफ्ना सन्ततीको शिक्षाका लागि पहुँच भएसम्म निजी विद्यालय (बोर्डिङ)
काठमाडौ । मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । युवा विद्यार्थी आन्दोलन समितिले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले अबको शिक्षालाई उत्पादनसँग जोडनुपर्ने
मनाङ,। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएको महसुस गर्दै मनाङका विद्यालय आवासीय बन्दै छन् । यस जिल्लामा रहेका चारवटा माविले यस कार्यको अवधारणा ल्याएको हो । विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति कम
बन्दै नयाँ पाठ्यक्रम
ईश्वरराज ढकाल सरकारले कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार गरेको छ। यो प्रारूप शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि लागू हुनेछ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक
काठमाडौँ, । अमेरिकामा बस्दै आएका विभुषण शाक्य र शिल्भा श्रेष्ठले आफ्नो विवाहको खर्चबाट १० लाख ‘टिच फर नेपाल’ शैक्षिक अभियानलाई सहयोग गरेका छन् । करिब १४ वर्षदेखि अमेरिकामा बस्दै
गुणस्तरीय शिक्षाबिना समृद्धि असम्भव
रमाकान्त शर्मा समृद्धि आजकलको थेगो भएको छ। नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा देशलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्वाचनबाट पर्याप्त बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वमा गरिब राष्ट्रको
शिक्षा सेवीको सहयोग
सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई यस वर्ष पनि लीलाराम कुन्तीदेवी न्यौपाने प्रतिष्ठानले समाजसेवी स्व. लीलाराम न्यौपानेको ८७औं जन्मजयन्तीको अवसर पारेर सम्मान गरेको छ। प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न विधामा
कोरियाली स्वयम्सेवीले बनाए परामर्श कक्ष
दक्षिण कोरियाली स्वयम्सेवीले हेटौंडा अस्पतालमा गर्भवतीका लागि परामर्श कक्ष निर्माण गरेका छन्। दक्षिण कोरियामा नर्सिङ अध्ययन पूरा गरी २ वर्षका लागि स्वयम्सेवा गर्न नेपाल आएकी दुई स्वयम्सेवी रोशनी र हिमानीले
ईश्वरराज ढकाल स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा गएको छ। विद्यालय क्षेत्रको सम्पूर्ण काम स्थानीय तहले गरिरहेका छन्। स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षाका २३